ज्येष्ठ महिनाको मासिक राशिफल ! | KTM Khabar
ज्येष्ठ महिनाको मासिक राशिफल !
२०७४ बैशाख ३१ गते १८:०४ मा प्रकाशित
३१ बैशाख । ज्येष्ठ महिनामा सूर्यले बृष राशिमा भ्रमण गर्दछन् । अन्य ग्रहहरूमध्ये सुरुमा मेष राशिमा रहेको बुध ग्रह १७ गते दिउँसो बृष राशिमा प्रवेश गर्नेछ । त्यस्तै वैशाखदेखि नै बृष राशिमा रहेको मङ्गल ग्रह यो महिनाभरि बृष राशिमा नै रहने सङ्केत छ । महिनाको सुरुमा कन्या राशिमा बक्री अवस्थामा रहेका बृहस्पति ज्येष्ठ ३० गते मार्गी हुने देखिन्छ, त्यस्तै बक्री अवस्थामैं रहेको शनिश्चर ग्रहले आगामी ०६ गते धनु राशि त्यागी बृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्नेछ । मीन राशिमा उच्च गृहमा विचरणशील शुक्र ग्रह १७ गतेपछि मेष राशिमा पुग्ने देखिन्छ । राहु र केतु ग्रह यथावत् क्रमशः सिंह र कुम्भ राशिमा रहनेछन् । शनिको राशि परिवर्तनका कारण आगामी ०६ गतेपछि गत मकर राशिमा रहेको शनिश्चरको साढेसाती तथा बृष र कन्या राशिको अढैया आगामी कार्तिक मसान्तसम्मका लागि समाप्त भएको छ भने उक्त अवधिसम्म तुला राशिमा साढेसाती तथा मेष र सिंह राशिमा पुनः अढैयाको प्रकोप रहने अवस्था छ ।
अन्य समग्र ग्रहगोचरको मूल्याङ्कन गर्दा मीन लग्नमा सङ्क्रान्ति परेको तथा लग्नेश बृहस्पति बक्री रहेकाले सरकारी कामकाज मेलमिलाप र वार्ताका माध्यमबाट मात्र सम्पन्न हुने सरकारी कामकाजमा सत्तापक्ष र विपक्षको अहमका कारण विलम्ब र ढिलासुस्ती हुने छ, यद्यपि महिनाको उत्तरार्द्ध सन्तोषजनक हुनसक्छ । गृष्म ऋतुको प्रारम्भिक महिना भएकाले गर्मीमा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ, नयाँनयाँ रोगव्याधि र महामारीको प्रकोप देखिन सक्छ । धान्यादि वस्तुको मूल्यमा बृद्धि हुनेछ । देश कलह, झैझगडा र द्वन्द्वको चपेटामा फँस्नसक्छ । मोटर, गाडी, हवाइजहाज आदि सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्यामा बृद्धि हुनेछ । सुन, चाँदीजस्ता धातुको मूल्यमा समेत बृद्धिको सङ्केत छ । ठाउँठाउँमा आँधीहुरी, आगलागी, अपहरण, चोरीडकैती आदि अप्रिय घटना घटेको दुःखद समाचार सुन्न पाइन्छ । तेलहन पदार्थको मूल्य आकासिने सङ्केत छ ।
राशिस्वामी मङ्गल र सूर्यको धनस्थानमा उपस्थिति रहेको देखिन्छ, त्यसैले आर्थिक दृष्टि यो महिना त्यति लाभदायी रहने सङ्केत छैन । स्वास्थ्यतर्फ आँखा र मुखको क्षेत्र कमजोर छन् । बोलीमा अङ्कुश लगाएकै बेस हुनेछ । घरपरिवारकै सदस्यका बीचमा मनोमालिन्य बढ्नाले एवं ससाना कुरामा झैझगडा मानसिक तनाव बढ्नसक्छ । अवाञ्छित व्यक्तिहरूउपर निर्भर रहनु पर्ने बाध्यता हुनसक्छ । व्यापारमा घाटा हुने वा धनमाल हराउने÷ चोरी हुने सङ्केत पनि छ । भाग्येश बृहस्पति पनि बक्री रहेको अवस्था छ, अतः व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति समेत सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरू बलिया हुनेछन् । तर छैटौं भावको बृहस्पति भएकाले मुद्दामामिला र अड्डाअदालतको कामका लागि राम्रो समय छ । सामान्यतया यस महिनाको ०७, ०८, १५, १६, १७, २४, २५ र २६ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
आफ्नै राशिमा सूर्यले प्रवेश गरेको छ, अतः यो महिना धनसम्पत्ति र सुखसुविधा आर्जन गर्ने पक्षमा आकर्षित रहनु हुनेछ । आत्मविश्वासको सिर्जना हुनेछ । सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेबारी प्राप्त हुनसक्छ । सुरुमा भाग्येश बुध र महिनाको उत्तरार्द्धमा राशिपति शुक्रले बाह्रौं भावमा उपस्थिति जनाउनाले यस अवधिमा मानसिक तनाव र चिन्ता बढ्ने सङ्केत चाहिं देखिन्छ नै, खर्चको मात्रा बढने छ, धनमाल हराउने वा चोरी हुने सम्भावना छ, अनि सरकारविरोधी, असामाजिक र हानिकारक कार्यमा संलग्नता हुनसक्छ । तर महिनाको पूर्वार्द्धमा राशिस्वामी शुक्र राज्यस्थानमा रहेकाले खर्च धेरै हुनेछ तर आम्दानीका मार्गहरू पनि पर्याप्त रहने छन् । प्रत्येक प्रयासमा मित्र र सहयोगीले पूर्ण सहयोग गर्नेछन् । सामान्यतया यस महिनाको ०१, ०२, ०९, १०, ११, १७, १८, १९, २७, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
उत्तरार्द्धका तुलनामा महिनाको पूर्वार्द्धमा केही शुभफल प्राप्त हुनेछन् । बाह्रौं घरमा रहेको सूर्य र मङ्गलको प्रभावले आम्दानीका मार्गहरू अवरुद्ध हुनेछन् । जुवातास, लटरी र सट्टापट्टातर्फ नहौसिनु ठिक हुनेछ, होस राख्नुपर्छ । व्यवहारिक खर्चको मात्रा बढ्ने छ । व्यक्तिगत स्वास्थ्य पनि अनुकूल हुनेछैन । यद्यपि १७ गतेसम्म राशिस्वामी बुधले राज्यस्थान ओगटेको हुँदा केही सन्तोष जनक अवस्था देखिन्छ । लामो दूरीको यात्रा गर्ने सम्भावना छ । व्यापार÷व्यवसायलाई बढाउने र चम्काउने अवसर मिल्नेछ । प्रणय सम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ । प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम हुनेछ । भाग्येश शनि बक्री रहेको हुँदा अरुले गरेको अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र असफलताका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने योग छ । सामान्यतया यस महिनाको ०२, ०३, ०४, ११, १२, १३, २०, २१, २९, ३० र ३१ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
राज्यस्थानमा रहेको सूर्य र पञ्चमेश मङ्गलको प्रभावले इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने समयका रूपमा यस महिनाको आगमन भएको छ । किनमेल र कारोबारहरू सफल हुनेछन् । करार र सम्झौताबाट लाभ मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवन, घरायसी सुख, प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि श्रेष्ठ समय हो । आय आर्जनका मार्गमा सुधार आउने छ । लामो यात्रा सुखद र सफल हुनेछ । भाग्येश बृहस्पति बक्री भएकाले केही नकारात्मक फल पनि प्राप्त हुनसक्छन् । दैनिकी सञ्चालनका क्रममा धनसङ्ग्रहमा कठिनाइ हुनेछ । नयाँ व्यवसाय वा उद्योगधन्दामा लगानी गर्दा राम्रो विचार पुर्याउनु ठिक हुन्छ । शत्रुले हानि पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछन् । घरव्यवहारमा असुरक्षाको भावना विकसित हुनसक्छ । सामान्यतया यस महिनाको ०४, ०५, ०६, १३, १४, १५, २२, २३ र २४ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
कर्मक्षेत्रमा राशिस्वामी सूर्य र मङ्गलको प्रभाव रहेकाले जेठ महिना अत्यन्त क्रियाशील र व्यस्त रहने समय हो । व्यापार र नोकरीका माध्यमबाट लाभ मिल्नेछ । आयमूलक र फलदायी यात्राको सम्भावना छ । आर्थिक समस्याहरू हल हुनसक्छन् । सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ । उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ । व्यवसायिक क्षेत्र र व्यापारको विस्तार हुनेछ । विपरीत परिस्थितिलार्ई कुशलतापूर्वक झेल्नाले आत्मविश्वास बढ्नेछ । शत्रुले हानि पुर्याउन सक्दैनन् । तर पञ्चमेश बृहस्पति बक्री रहेकाले सृजनात्मक क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्न सक्नुहुन्न र बुद्धिविवेकको ह्रास हुनेछ । सन्ततिको उन्नतिप्रगति र स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नेछ । बढी आशावादी हुनु उचित होइन, तथापि यो महिना राम्रो महिना छ । सामान्यतया यस महिनाको ०७, ०८, १५, १६, १७, २४, २५ र २६ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
महिनाको १७ गतेसम्म राशिस्वामी बुध आठौं भावमा रहने भएकाले महिनाको पूर्वार्द्धका तुलनामा उत्तरार्द्ध असल छ, उता भाग्यमा रहेको सूर्य र मङ्गलले मिश्रित प्रभाव प्रदान गर्नेछ । लामो यात्रा सफल हुनेछैन तर उच्च पदमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित भेटघाट हुने तथा सल्लाह र सद्भाव प्राप्त हुनेछ । मातापिता र अभिभावकवर्गको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नसक्छ । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुनेछ । विश्वासको वातावरण बन्नाले व्यावसायिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा सफलता आर्जन हुनेछ । ज्येष्ठ १७ गतेपछि मन प्रसन्न र फुर्तिलो रहनेछ र परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुनेछ, शुभ र श्रेष्ठ कर्ममा लगनशीलता बढ्ने छ । आम्दानीका मार्ग बढ्ने छन् । सातौं शुक्रले महिनाको प्रारम्भमा नै आनन्दप्रद यात्राको सङ्केत गर्दैछ । सामान्यतया यस महिनाको ०२, ०९, १०, ११, १७, १८, १९, २७, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
आठौं भावमा सूर्यको प्रवेश भएको छ । विनाकारण झगडा र विवाद हुनेछ । शङ्कास्पद कारोबार र क्रियाकलाप सहभागी नबन्नु राम्रो हुनेछ, त्यस्तै खराब र अनैतिक मानिने कामभन्दा टाढा रहनु नै कल्याणकारी हुनेछ । तर १७ गतेसम्म भाग्येश बुध सातौं भावमा रहनाले प्रसिद्धि र सम्मानमा बृद्धि हुनेछ । विद्वानहरूका साथमा घुलमिल हुने मौका आउने छ । बन्दव्यापारमा बढावा हुनेछ । विपरीत लिङ्गीहरूबाट सहायता मिल्नेछ । सुखद यात्रा हुने सङ्केत पनि छ । प्रतिस्पर्धामा सफलता हाासिल हुनेछ । ०६ गतेपछि पञ्चमेश शनिश्चर दोस्रो भावमा बक्र गतिका साथमा आउने हुँदा आम्दानीका मार्ग अवरुद्ध हुनसक्छन् । तर नयाँनयाँ उद्योगधन्दा र व्यवसायको प्रारम्भ हुने वा नयाँ रोजगारीको सङ्केत देखिन्छ । सामान्यतया यस महिनाको ०२, ०३, ०४, ११, १२, १३, २०, २१, २९, ३० र ३१, गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
सातौं भावमा बसेको सूर्य र राशिस्वामी मङ्गलको प्रभाव त्यति अनुकूल हुँदैन । मानसिक रूपले तनावग्रस्त र अस्वस्थ हुने सम्भावना छ । यद्यपि एघारौं घरमा रहेको भाग्येश बृहस्पतिको प्रभावले यस महिनालाई उत्साहपूर्ण समय मान्दा हुन्छ । विदेश अथवा दूरदराजमा रहेको स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूसितको सम्बन्ध सुमधुर रहने छ । नयाँनयाँ उद्यम र इलममा संग्लग्न हुनु पर्ने छ । प्रतिस्पर्धा वा परीक्षामा सहभागी हुँदा सफलता आर्जन हुनेछ । आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित हुनसक्छ । राशिस्वामीको आफ्नो राशिमा पूर्णदृष्टि रहने हुँदा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित भइने छ । आकस्मिक रूपमा हितकारी घटना घट्न सक्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा र सुखसम्मृद्धि बढ्ने छ । पुराना साथीभाइ र सहयोगीहरूसँग भेटघाट हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०४, ०५, ०६, १३, १४, १५, २२, २३ र २४ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
छैठौं भावमा बसेका सूर्य र मङ्गलको प्रभावले पहिले देखिएका प्रायशः समस्याहरूको निराकरण हुनसक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । पछाडि उछित्तो काड्ने र कुरा काट्नेहरू आफैं चुप लाग्नेछन् । नोकरी र व्यायसायिक जीवनमा सुधार आउने छ । प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ । आफ्नो सर्कलमा सम्मान र साख मिल्नेछ । राशिस्वामी बृहस्पति कर्मक्षेत्रमा बक्री रहेकाले व्यापार, नोकरी वा कारोबारमा धेरै गरेको प्रयास सङ्घर्षका बाबजुद सफल हुनेछ । व्यापारको विस्तार हुनेछ र पद बढ्ने छ । वरिष्ठ एवं शक्तिशाली व्यक्तित्वबाट स्नेह र सम्मान प्राप्त हुनेछ । व्यापार र नोकरीको सिलसिलामा धेरै घुमफिर हुनसक्छ । पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ । शनिश्चरले ०६ गतेपछि बाह्रौं भावमा प्रवेश गर्ने हुँदा आर्थिक पक्षमा बाधा पुग्नसक्छ । सामान्यतया यस महिनाको ०७, ०८, १५, १६, १७, २४, २५ र २६ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
पाँचौं भावको सूर्यको प्रभावले मनमा ठूलो उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुनेछ । लुकेको प्रतिभा र व्यवसायिक योग्यताको सहज विकास हुनेछ । कार्यशैलीमा गम्भीरता आउने छ । सुखसुविधा भोग गर्न पाइने छ र मन प्रसन्न रहने छ । कामप्रतिको लगनशीलताका कारण प्रशस्त लाभ मिल्नेछ । उता बक्री नै भए पनि राज्यस्थानमा राशिस्वामी शनिश्चरको प्रभाव रहने भएकाले दाजुभाइ र दिदीबहिनीका माझमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ । शीघ्र निर्णय गर्ने सामथ्र्यको विकास हुनेछ । प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित सम्पर्क बढ्ने छ । तर दोस्रो घरमा रहेको केतुले मुखलाई अनियन्त्रित बनाउन सक्छ, सचेत हुनुपर्छ र खासगरी घनिष्ठ साथीभाइ र नातागोताका मानिससित नम्र बोलीको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । सामान्यतया यस महिनाको ०१, ०२, ०९, १०, ११, १७, १८, १९, २७, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
चतुर्थ भावमा बसेको सूर्य र कर्मेश मङ्गल तथा कर्मक्षेत्रमा जाने राशिस्वामी शनिश्चरको प्रभावले यो महिना कडा मिहिनेत र परिश्रम गर्ने योग छ । निरन्तर गरिएको कष्टप्रद परिश्रमका कारण छिटै थाकिन्छ र कार्य क्षमतामा समेत कमी आउने छ । मातापिता र अभिभावक वर्गको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नेछ । यद्यपि १७ गतेसम्म तृतीय भावमा रहने पञ्चमेश बुधका कारण मिहिनेतको राम्रो नतिजा हात पर्ने छ । ससाना यात्राबाट राम्रो फल मिल्नेछ । विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै भाग्येश शुक्रको प्रभावले परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुनसक्छ । घरायसी सुखसुविधा बढाउने भौतिक सामाग्रीका निम्ति धनव्यय हुनेछ । घरायसी नातागोताका व्यक्तिहरूको जमघट हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०२, ०३, ०४, ११, १२, १३, २०, २१, २९, ३० र ३१ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
तृतीय भावमा बसेका सूर्य र भाग्येश मङ्गलको प्रभावले यो महिना राम्रो महिना छ । व्यावसायिक कारोबारबाट लाभ मिल्नेछ । बहुप्रतीक्षित इच्छा, आकाङ्क्षा र उद्देश्य सफल हुनसक्छन् । मनमा उत्साह र साहसी प्रवृत्ति देखा पर्नेछ । यात्राबाट लाभ मिल्नेछ । जग्गाजमिनसँग सम्बद्ध कारोबारबाट लाभ प्राप्त हुने सम्भावना छ । राशिस्वामी बक्री रहेकाले धेरै हौसिनु उचित हुँदैन, यद्यपि समग्रमा यो उत्तम समय छ । दाम्पत्य जीवनमा सामान्य चिसोपन देखिन सक्छ । कुनैकुनै समयमा मनले इच्छाएको परिणाम प्राप्त गर्न कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ । काम ढिलो सम्पन्न हुनेछ । १७ गतेसम्म तृतीयेश शुक्र आफ्नै राशिमा रहेकाले उक्त अवधिभित्र उच्चपदस्थ व्यक्ति र राज्यपक्षबाट रोकिएका काम निर्बाध सम्पन्न हुनेछन् । सामान्यतया यस महिनाको ०४, ०५, ०६, १३, १४, १५, २२, २३ र २४ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।